Забур 115 CARS - Nnwom 115 ASCB
1Ɛnyɛ yɛn, Ao Awurade, ɛnyɛ yɛn
na wo din na animuonyam nka,
wʼadɔeɛ ne wo nokorɛdie enti.
2Adɛn enti na aman no bisa sɛ,
3Yɛn Onyankopɔn wɔ ɔsoro;
deɛ ɔpɛ biara na ɔyɛ.
5Wɔwɔ ano, nanso wɔntumi nkasa;
wɔwɔ ani, nanso wɔnhunu adeɛ.
wɔwɔ hwene, nanso wɔnte hwa.
Wɔwɔ nan, nanso wɔnnante.
Wɔntumi mma nnyegyeeɛ bi mfiri wɔn mene mu.
9Ao Israelfoɔ, momfa mo ho nto Awurade so,
ɔyɛ mo ɔboafoɔ ne kyɛm.
10Ao Aaron fie, momfa mo ho nto Awurade so,
11Mo a mosuro no, momfa mo ho nto Awurade so,
12Awurade kae yɛn na ɔbɛhyira yɛn:
Ɔbɛhyira Israel fie,
ɔbɛhyira Aaron fie
13Ɔbɛhyira wɔn a wɔsuro Awurade,
nkumaa ne akɛseɛ nyinaa.
14Awurade mma wʼase nnɔre,
16Ɔsorosoro yɛ Awurade dea,
nanso asase deɛ, ɔde ama onipa.
17Ɛnyɛ awufoɔ na wɔkamfo Awurade,
wɔn a wɔkɔ fam dinn no rentumi nkamfo Awurade.
ASCB : Nnwom 115